ny sabatra & ny grail slot
Fitsarana Tampony nazerany ny Matihanina sy ny tsy Matihanina Fanatanjahan-tena Fiarovana Asa, mitarika amin'ny fomba ara-dalàna sportsbooks amin'ny fanjakana izay te azy ireo ny firongatry max hamboly slots. Ny orinasa roa amin'izao fotoana izao no miasa ho toy ny U ny sabatra & ny grail slot.
Bally ny nifindra akaiky kokoa ny mahazo fahazoan-dalana rehefa afaka adiny roa nandre amin'ny farany fankatoavana ihany koa hotontosaina ny 18 Martsa. Aloha ao amin'ny fivoriana iray niarahana niombon-kevitra tolo-kevitra natao mba fahazoan-dalana Bally ny Corp., fantatra teo aloha ho Kambana Renirano Maneran-tany ny Holdings.
Ny birao ny alarobia soso-kevitra fankatoavana ny fahazoan-dalana izay hanome Caesars fialam-Boly Inc.fanaraha-maso ny fanjakana lehibe indrindra rojo ny foko sy ny sportsbooks poker hiatrika tradus in romana. Ny birao ny mpikambana soso-kevitra niarahana niombon-kevitra fankatoavana amin'ny iray hafa fahazoan-dalana fangatahana izay peripherally anjara Caesars, fa mbola sarotra kokoa. toy ny varotra ampahibemaso orinasa ao amin'ny fanjakana, miasa ny Montbleu fialan-tsasatra amin'ny Stateline amin'ny Lake Tahoe sy ny olana tsara vady sahaza hitany fa maro ny mpitantana poker hiatrika toetra fanjakana simba 2.